Ny Fiainantsika sy ny Fanompoana VJ: Fandaharana 24-30 Oktobra 2016
“Miezaha Hihavana Amin’ny Hafa”: (10 min.)
Oh 19:11: Miezaha ho tony rehefa misy mahatezitra anao (w14 1/12 12-13)
Oh 18:13, 17; 21:13: Ataovy azo antoka hoe fantatrao daholo ny tena zava-nitranga (w11 15/8 30 § 11-14)
Oh 17:9: Miezaha ho be fitiavana ka avelao ilay fahadisoana (w11 15/8 31 § 17)
Oh 17:5: Nahoana isika no tsy maintsy mifidy tsara ny fialam-boly ataontsika? (w10 15/11 6 § 17; w10 15/11 31 § 15)
Oh 20:25: Nahoana io toro lalana io no azo ampiharina amin’ny fiarahana alohan’ny fanambadiana sy ny fanambadiana? (w09 15/5 15-16 § 12-13)
Famakiana Baiboly: (4 min. na latsaka) Oh 18:14–19:10
Fitoriana: (2 min. na latsaka) Manolora Fanasana Hanatrika Fivoriana. (inv)
Fiverenana Mitsidika: (4 min. na latsaka) Resaho ilay fanasana (inv). Amin’ny farany, dia asehoy ilay video hoe Inona no Atao any Amin’ny Efitrano Fanjakana?
Fampianarana Baiboly: (6 min. na latsaka) lv 57 § 14-15: Ampio ilay mpianatra hahita hoe tokony hiezaka hanao fitafiana sy taovolo maotina izy rehefa mivory.
Hotahina Izay Tia Fihavanana: (15 min.) Fiaraha-midinika. Alefaso aloha ilay video hoe Hotahina Izay Tia Fihavanana. Fanontaniana: Inona no tsy tokony hataontsika raha lasa tsy mifankahazo amin’ny hafa isika? Inona no fitahiana ho azontsika raha ampiharintsika ny Ohabolana 17:9 sy ny Matio 5:23, 24?
Fianarana Baiboly: (30 min.) kr toko 2 § 35-40, “Mino ve Ianao fa Tena Misy ny Fanjakan’Andriamanitra?” ary ny tabilao “Ny Fanjakan’Andriamanitra: Fitondrana Tena Misy” sy ny efajoro “Inona avy no Nitranga Talohan’ny Nanjakan’ny Mesia?”
Hira 144 sy Vavaka
Ny Fiainantsika Kristianina sy ny Fanompoana: Fandaharana ho An’ny 24-30 Oktobra 2016